नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : कविता : के राजनीति गर्छौ रवीन्द्र तिमी ??
कविता : के राजनीति गर्छौ रवीन्द्र तिमी ??
के राजनीति गर्छौ रवीन्द्र तिमी ??
न मान्छे लुट्न जानेका छौ
न त मान्छे कुट्न जानेका छौ
न घाँटी रेट्दै तिमीले भुट्न जानेका छौ !
न त पालै पालो यता र उता
छोरी ज्वाँई बोकाउँदै जुट्न जानेका छौ
त्यति मात्र होइन रवीन्द्र,
न त दुनियाँलाई बेकुफ बनाउँदै,
पाइलट बन्न र फुट्न जानेका छौ
न त अर्बौँ हसुरेर छुट्न जानेका छौ
अझ भन्छौ, म राजनीति गर्छु भनेर !
तिमी मूर्ख हौ रवीन्द्र मूर्ख !
लुटतन्त्र लाई लोकतन्त्र भनिने देशमा
गलगाँड तन्त्रलाई गणतन्त्र भनिने देशमा
एउटा राजा फालेर हजार राजा पाल्ने देशमा
धर्म निरप्रेक्ष्यताका नाममा इसाई अँगाल्ने देशमा
के कम थियो र तिमीलाई ??
खुब जान्ने भएर देश फर्क्यौ
हाम्रै पालामा देश बनाउँछु भन्दै,
परिवर्तन हाम्रै पालामा सम्भव छ भन्दै,
आफू र आफ्ना स्वार्थहरूबाट तर्क्यौ
इस् नाप्यौ तिमीले !!
तिम्रै मिलनहरू बिछोड हुन खोज्ने समाजमा
अपराधका सरदारहरू रोज्ने समाजमा
तिमीले के राजनीति गर्छौ रवीन्द्र ??
देश दुनियाँ बुझ
पछि लाग टाउका काट्नेका
पछि लाग रगत सँग सत्ता साट्नेका
पछि लाग बुढानीलकण्ठमा बसेर,
पैसासँग पद बाँट्नेका !
छोडिदेऊ धाउन हरिद्वार
अनि बल्ल तिमी बन्ने छौ ठुलो नेता
जोड्ने छौ मनग्यै जाय जेथा
फ्याट्टै मन्त्री पो बन्छौ कि तिमी,
कसलाई के थाहा !!
- रामप्रसाद खनाल, जुलाई २८, २०२१, अमेरिका
रबीन्द्र मिश्रको प्रस्ताबका बिपक्षमा उभिनेहरुका नाममा !
विगतमा विवेकशील साझा पार्टी जोगाउन र एक पार्न भन्दै केही गलत लाइनमा सम्झौता गरे पनि अहिले रवीन्द्र मिश्र क्लियर देखिए । उनले पार्टी र बिचार भन्दा माथि देश देखे, खतरा मोलेर वास्तविकता बोले, जन जनको आवाज बोले, विगतको गलत लाइनलाई सच्याए जुन अत्यन्त सकारात्मक कुरा हो ।
ईतिहास र नैतिक शिक्षा पढ्न छाडे पछि बिग्रिँदै, भत्किंदै गएको हाम्रो समाज र अपराधलाई राजनीति र अपराधीहरुलाई नेता मान्न, पुज्न शुरु गरेको हाम्रो समाजमा प्रचण्ड, बाबुराम, ओली, माकुने, देउवा, यादव, महतोहरुलाईनै हरिद्वार ठान्ने र मान्नेहरू, लुटतन्त्र लाई लोकतन्त्र ठान्ने, गलगाँड तन्त्रलाई गणतन्त्र मान्नेहरू, जति धेरै अपराध गर्न सक्यो त्यसलाई त्यति ठुलो नेता पुज्नेहरू रवीन्द्रलाई खुइल्याउन हात धोएर लागेका छन् अहिले । किनकि उनीहरूको लुटतन्त्र माथि रवीन्द्रले धावा बोल्ने हिम्मत गरे । गलत कुरालाई गलत भन्दै ढिलै भए पनि देश मारा सङ्घीयता, इसाई बोक्ने धर्म निरपेक्षता र एउटा राजा फालेर हजारौँ छोँटे राजा पाल्ने, देश दोहन गर्ने जनता मारा लुटतन्त्र लाई सच्याउन खोज्नु रवीन्द्रको ठिक लाइन हो, यसलाई करेक्सन गर्ने हिम्मत गर्नु सकारात्मक कुरा हो । रवीन्द्रले आफ्नो प्रस्तावित लाइनमै अगाडि बढुन्, यदि अब पनि कम्प्रोमाइज गरे र फेरी पछाडि फर्के भने रवीन्द्र र उनको राजनीति सकिने छ ।
गलत कुराहरू करेक्सन गर्न नसक्दा प्रचण्ड, बाबुराम, ओली, माकुने, देउवा, थापा, यादव, महतोहरू र यिनका पार्टी नामका पसलहरूको हबिगत के छ देख्नु भएकै छ । अनि ती नालायक र तिनका महा नालायक पिछलग्गु भक्तहरूले रवीन्द्रको खोइरो नखने कसको खनुन् यसलाई मैले सहज रूपमा लिएको छु ।
केहीले मलाई प्रश्न गर्नुभएको छ - तपाईं आफूलाई स्वतन्त्र भन्नुहुन्छ, राजनीति गर्दिन भन्नुहुन्छ तर राजनीतिक कुरामा किन यति धेरै चासो ? म फेरी क्लियर गरौँ - विगत २६ वर्ष यता म कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा छैन र हुने पनि छैन । म स्वतन्त्र छु, तितो तर सत्य बोल्छु, लेख्छु किनकि म एउटा सचेत नागरिक हुँ, पत्रकारिता गर्ने मान्छे हुँ । राजनीति गर्नु र बुझ्नु फरक कुरा हुन । म राजनीति गर्दिन तर अलिकति बुझ्छु जस्तो लाग्छ । राम्रो लाई राम्रो र नराम्रो लाई नराम्रो भन्नु मेरो धर्म हो । म आफ्नै पौरख र पसिनामा विश्वास गर्ने र चल्ने मान्छे हुँ । कुरो यही हो बुझे भैगो !
मैले हिँजो मात्र पोस्ट गरेको र धेरैले मन पराउनुभएको स्ट्याटस यहाँ तल पनि राखेको छु, न हेरेकाले हेरिदिनुहोला कृपया ।
"हल्लै हल्लाको देश, लुटतन्त्र लाई लोकतन्त्र भनिने देश, गलगाँड तन्त्र लाई गणतन्त्र भनिने देश, जति धेरै अपराध गर्न सक्यो त्यति ठुलो नेता बनिने देश, राक्षसी तन्त्र चल्ने देश, चोरलाई चौतारो र साधुलाई शूली हुने देश, शतीले श्राप गरेको हाम्रो देशमा रवीन्द्र मिश्रले अलि ढिलो बोले तर सत्य बोल्ने हिम्मत गरे । देश सबै भन्दा माथि हुनै पर्छ । कुर्सीको लागि होइन बिचारका लागि बहस मात्र होइन विभाजन नै भयो भने पनि ठिक छ, अब रवीन्द्र उनकै प्रस्तावित मार्ग चित्रमा डटेर अगाडि बढुन् । मिलनहरू बिछोड हुन सक्लान् तर रवीन्द्रले अब खुट्टा कमाउनै हुन्न । म उनको समर्थक भएर वा उनको पार्टीको शुभचिन्तक भएर होइन, राजनीतिबाट पूर्ण अलग, एउटा स्वतन्त्र र साधारण मान्छे भएरै भन्दै छु - हल्लै हल्लाका भरमा रवीन्द्रको चरित्र हत्या गर्न र उनलाई डाम्न खोज्नेहरूलाई कौवाले कान लाग्यो भन्दा कौवाका पछाडि नदौडिन र आफ्नो कान छाम्न आग्रह गर्दछु । अपराध र भ्रष्टाचारका सिँढी चढ्दै आएका नालायकहरूलाई आफ्नो आदर्श र नेता मान्नेहरूले, आरती उतार्नेहरूले रवीन्द्रको खोइरो नखनेकै ठिक होला कि । हो भोलि उनी गलत बाटो गए भने त्यो बेला जे गर्नु पर्छ गरौँला तर हाल सम्म उनी यी सत्ता पक्ष, प्रतिपक्षका नालायकहरू भन्दा दश गुणा बेटर छन् । सत्य तितो हुन्छ ।"